Biafra: keenụ ájị IHE apụghị izere ezere - The Biafra Telegraph
Home Biafra Featured World News Biafra: keenụ ájị IHE apụghị izere ezere
Biafra: keenụ ájị IHE apụghị izere ezere
at 00:11:00 Biafra, Featured, World News,
• Ụbọchị: 28th February 2017
The ọhụrụ ọchịchị gangsterism site British ọchịchị na Nigeria pụtara ịdị irè nke IPOB si dịghị onye ime ihe ike postcho n'ihe banyere mweghachi nke Biafran onwe ha. Egwu nke ọnwụ ka onye ndú nke Biafra Mazi Nnamdi Kanu aghọwo kwa ụbọchị, kwa izu na Monthly omume.
Kemgbe ahụ ọ bịara na-alụ, na British ọchịchị na ya islam goons ndị Hausa / Fulanis na Nigeria enweghị respite, ha na-echegbu onwe ya otú ahụ n'abalị ahụ e converted n'ime a ụbọchị ezumike, erughị ala nke na egwu jikoro bụghị nanị ebibi British ọchịchị zuru ụwa ọnụ image ma ada Nigeria aku na uba na ya na ikpere. Biafra onwe ha bụ ndị a ka ga weghachiri eweghachi ma-ezighị ezi mmetụta nke mmegharị na ma British na Nigerian ọchịchị egosiwo na n'ezie pen bụ ike karịa a egbe. Ọ bụrụ na akara nke secession na-kpara n'etiti Nigeria na Biafra na-enweghị British Setan adọ, Biafra ga-gafere ya banyere 45 afọ gara aga.
Britain ga kwusi ugbu a gaa n'ihu site n'inyere na abetting ihe ugbua nwụrụ anwụ agabiga mbara igwe a na-akpọ Nigeria, ihe bụ mkpa agbalị ịtụte, resuscitate ma ọ bụ ịkpọte a decomposing n'ozu contraption akpọ Nigeria onye olili ndokwa e bipụta ya otú a na-akpọ ndị nwe islam n'ebe ugwu Nigeria caliphate .
Smith onye ọzụzụ atụrụ na atụrụ ga-achụsasịkwa adịghị emetụta ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-eme Mazi Nnamdi KANU n'ihi na, ọ bụla Biafran ị na-ahụ n'okporo ámá nke Ijaw, Itskiri, Portharcaut, Abia, Enugu ma ọ Akwa-Ibom bụ a Rabshake.
Anyị ọgụ readiness ekwesịghị a tụrụ ruru anyị Democratic na obodo obibia kwupụta na mweghachi nke Biafra onwe ha.
Ọ bụrụ na egbe na mgbọ nwere ike ịkwụsị Biafra site abụrụ dị ka a free mba achịkwa ya ndị mmadụ, mgbe na-egbu ọtụtụ nde ndị ikom na ndị inyom, na ụmụaka si 1966-2017 ya aha a gaara obliterated kpamkpam na akụkọ ihe mere eme akwụkwọ dị, ndi Islam-eyi ọha egwu ọchịchị na Nigeria gbalịrị ebu ya ma okpu dara ada n'ụzọ.
Dabere na ọmụma na-eru anyị, na British daa ọdịda ihere ndọrọ ndọrọ ọchịchị eduzi na Biafraland na nso nso-agbalị ka o doo omenala ndú Biafraland ịchịkwa ha na-eto eto na ihe omume nke ọnwụ IPOB onye ndú dị ka iji nkata ikuru mmiri.
Great Britain bụ agaghịkwa akwa na 21 na narị afọ zuru ụwa ọnụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na na, ọ ihere jụrụ ịnakwere na ha bụ alaeze emebiela. Ịkpa nkata igbu mmadu Mazi Nnamdi KANU ndị Biafran ndú na nduzi nke Radio Biafra London site British ọchịchị bụ kasị elu mgbe nke ụjọ na adịghị ike. Mgbe British ọchịchị gburu ihe mbụ Biafran ndú n'ozuzu CHIUKWU Emeka Odumegwu Ojukwu, obere ka ha mara na nwoke dị ka IPOB onye ndú na-ele SITE CONNER? The British ọchịchị ekpewo ikpe n'ihi na ọ na-agawanye, ndị mmụọ ọjọọ na Setan gbara na scuttling ntoputa mba Biafra. Anyị ga-adị na BIAFRAN onwe ha ga-abịa.
Anyị ṅụụrụ weghachi Chineke anyị nyere mba n'udo, ma ọ bụrụ na British ọchịchị na-esi ọnwụ na anyị na-ese n'ime abụọ agha obodo n'ebe ọdịda anyanwụ Africa, anyị dị njikere.
-Eme ka mba ndudue banyere nke a, ọ dịghị otu ntutu isi site na anyị onye ndú Mazi Nnamdi KANU adaa n'ala, ọ na-Biafran onwe ha ma ọ bụ Nigeria ga-ike a ga-ebibi.